Mini Skirt ဝတ်ဆင်ရာမှာ သိထားသင့်သော အချက်များ – FemaleWear.net
အခုခေတ်မှာ ခေတ်ဆန်ဆန်ဝတ်ဆင်လိုတဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက် mini skirt လေးတွေဟာလည်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလို mini skirts တွေဝတ်ဆင်ရာမှာ သိထားသင့်တဲ့ အချက်တွေလည်းရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော…
1. Mini skirt ကို ဖိနပ်အမြင့်နဲ့တွဲစီးမယ်ဆိုရင် မိတ်ကပ်ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလိမ်းချယ်ပြီး အပေါ်ပိုင်းကိုလဲ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း Design မျိုးကို ရွေးချယ်ပေးပါ။
2. ထိုင်တဲ့အခါ မလုံမလဲဖြစ်ပြီး မကြာခဏဆွဲချနေတာမျိုး၊ မလုပ်ပါနဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံုကြည်မှုမရှိတာပေါ်လွင်ပြီး ရုပ်ပျက်ပါတယ်။ ကိုယ့်စကပ်က ထိုင်တဲ့အခါ တိုလွန်းတယ်လို့ခံစားရရင်နောက်တစ်ခါ အဲ့လိုစကပ်မျိုးမဝတ်ပါနဲ့။
3. ခပ်ကျပ်ကျပ်စကပ်တွေက ထိုင်တဲ့အခါပေါင်သားတွေကို ပိုပေါ်စေပြီး၊ ခပ်ကားကားစကပ်တွေကတော့ ခြေထောက်တွေကို ပိုလုံခြုံစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်သွားမယ့်နေရာကိုမူတည်ပြီး စကပ်တွေကိုရွေးချယ်ပါ။
4. မိန်းကလေးဆန်ဆန်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေဖို့လိုတဲ့အခါမျိုးမှာ ကပ်ရပ်နေတဲ့စကပ်လေးတွေက သင့်ကိုပိုတင့်တယ်စေမှာပါ။ Circle,Cartwheel လို စကပ်အဝဲလေးတွေကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြေးလွှားနေချင်တဲ့အခါမျိုးဆိုပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
5. အရပ်ရှည်တဲ့မိန်းကလေးဆိုရင်တော့ mini skirt ကိုသေချာရွေးချယ်ဝယ်ယူစေချင်ပါတယ်။ mini skirt ဆိုတာ သာမာန်အရပ်အမြင့်ရှိသူတွေနဲ့ပိုလိုက်ဖက်လို့ပါ။
Emily Ratajkowski ရဲ့ Weeding Fashion